Ogaden News Agency (ONA) – Morocco oo Xidhiidhka U Jartay Iran, Ogow Sababta.
Morocco oo Xidhiidhka U Jartay Iran, Ogow Sababta.
Posted by Dayr	/ May 3, 2018
Boqortooyada Morocco ayaa ku eedaysay Dowlada Iran inay taageero militari siineyso Jabhada u dagaalameysa madax-banaanida dhulka Galbeedka Sahara.
Morocco ayaa sheegtay in Tehran ay maalgeliso Jabhada (Polisario Front) oo u dagaalanta xoriyada dhulka Galbeedka Sahara oo ay Morocco gumaysato. Wasaarada Arrimaha Dibada ee Morocco ayaa sheegtay inay xidhi doonto Safaarada ay ku leedahay Tehran. Waxayna dowlada Morocco sheegtay inay dalkeeda ka saari doonto Safiirka Iran u fadhiyey wadankooda.
Nasser Bourita, Wasiirka Arrimaha Dibada ee Morocco ayaa sheegay in ay hayaan cadeyn taageerada Iran siiso Jabhada uu dagaalka kala dhaxeeyo. Wasiirka ayaa sheegay in bishii lasoo dhaafay kooxda Xisbullah ay jabhadaasi u keentay gantaalada lidka diyaaradaha ee SAM9, SAM11 iyo Strela missiles.
Kooxda Xisbullah oo fadhigoodu yahay dalka Libnaan ayaa beenisey warka kasoo baxay Morocco, iyagoo sheegay in eedeyntan dowlada Morocco ay ku cadaadiyeen xulafadooda Maraykanka, Sacuudiga iyo Israel. Dowlada Iran ayaan weli ka jawaabin go’aanka kasoo baxay Rabbat.
Galbeedka Sahara waa mid la isku heysto tan iyo sanadkii 1975-tii kadib markii dhulkaasi saxaraha ah ay ka baxday dowlada Spain oo horey u maamuli jirtay, waxaana xiligaasi sheegtay dowladaha Morocco, Muritaniya iyo kooxda Polisario oo iyadu taageero ka helaysa Aljeeriya. Inkastoo dalka Muritaniya uu xili danbe loolankaasi isaga baxay, ayaa hadana waxaa weli socda dagaalka u dhaxeeya Morocco iyo Polisario oo isku haya maamulida dhulkaasi.
Hadalka kasoo baxay Morocco ayaa kusoo beegmay xili dalalka Carabta ee xulafada la ah Sacuudiga ay olole ugu jiraan in la burburiyo heshiiskii Iran ee Nukliyeerka, iyagoo ku doodaya in xayiraada dhaqaale ee laga qaaday Iran ay u fududeysay in Tehran ayaa dar dar geliso maalgelinta jabhadaha ay u adeegsato wadamada Carabta